Bright News - Page 52 of 55 - နောက်ဆုံးရသတင်းများ၊ဗဟုသုတများ၊နိုင်ငံတကာသတင်းများနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါသည်။
သင့်ကိုအံ့အားသင့်သွားစေမယ့် ကမ္ဘာတစ်လွှားက ထူးဆန်းတဲ့ သတ္တဝါလေးများ
ကျနော်တို့ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကွဲပြားတဲ့ခြားနားမှုရှိပြီး ထူးခြားထင်ရှားတဲ့အရောင်များ မတူညီတဲ့ပုံပန်းသဏ္ဍာန်များရှိသော သတ္တဝါများတည်ရှိနေပါတယ်။ အချို့သောသတ္တဝါများဟာ ကျနော်တို့အတွက် အရမ်းကိုအံ့အားသင့်စရာကောင်းနေပြီး အခြားကမ္ဘာကလို့တောင်ထင်မှတ်မိစေမှာပါ။ ယခုဖေါ်ပြပေးမှာကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ သတ္တဝါလေးများရဲ့ အံ့အားသင့်စရာ အကြောင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁. မွန်ဂိုးလီးယားနှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့မှာတွေ့ရတဲ့ ခြေတံရှည် နားရွက်ရှည် ဂျာဘောင် လို့ခေါ်တဲ့ကြွက်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ၂. အနီရောင်နှုတ်ခမ်းများရှိသော Batfish ငါးများဟာ […]
လက်ကျိုးပြီး ဆေးရုံရောက်နေချိန် သူနာပြုကောင်လေးအား ချစ်တယ်ဟုပြောပြီး လက်ထပ်ခွင့်ပါတောင်းခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး
မေ့ဆေး၊ ထုံဆေးနဲ့ အခြားပြင်းထန်သောဆေးဝါးတွေဟာ လူနာတွေကို သတိမေ့မျော မလှုပ်ရှားနိုင်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သလို၊ ထိုဆေးရှိန် မပျယ်သေးချိန်မှာလည်း လူနာတွေဟာ ကယောင်ကတမ်းနဲ့ ရယ်စရာတွေပြုလုပ်တတ် ကြပါတယ်။ စာဖတ်သူများအနေနဲ့လည်း ထိုကဲ့သို့သောလူနာများရဲ့ ရယ်စရာကောင်းသောဗီဒီယိုများကို ကြည့်ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ယခုဖြစ်စဥ်ဟာလည်း ထိုသို့ ရယ်စရာကောင်းသော ဖြစ်ရပ်များထဲမှ တစ်ခုအပါအဝင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးလူနာတစ်ဦးဟာ လက်ကျိုးနေတာကြောင့် မေ့ဆေးအသုံးပြုပြီး […]
နာမည်ကျော် ဇာတ်ကားများမှ ဇာတ်ကောင်များကို မိတ်ကပ်ပညာဖြင့် ဘယ်လိုဖန်တီးကြလဲ
မိတ်ကပ်ပညာရဲ့စွမ်းပကားကို ကျနော်တို့သိရှိပြီးဖြစ်မှာပါ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိတ်ကပ်ပညာရှင်များရဲ့ ဖန်တီးမှုအရည်အသွေးကလဲ အံ့မခန်းပြောင်းလဲတိုးတတ်လျက်ရှိပါတယ်၊ တစ်ချို့သော ဇာတ်လမ်းများတွင် ဇာတ်ကောင်စရိုက် ရဲ့လိုအပ်ချက်အရ ဇာတ်ကောင်ကိုပိုမိုပီပြင်အောင် ဖန်တီးဖို့လိုအပ်လာတဲ့အခါမှာ မိတ်ကပ်ပညာဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်၊ ထိုသို့ဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ မူလဇာတ်ကောင်နေရာမှာသရုပ်ဆောင်မဲ့ အနုပညာရှင်ဟာ လုံးဝမမှတ်မိနိုင်လောက်အောင် အခြားသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ ထိုမိတ်ကပ်ပညာရှင်တို့ဟာ ဆုရဇာတ်ကားများနဲ့ ဇာတ်ကောင်တို့ကိုနောက်ကွယ်မှ အဓိကကူညီပေးခဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်။ ယခုတစ်ခါမှာတော့ နာမည်ကြီး ဇာတ်ကောင်များကို […]
ဓါတ်ပုံပညာရဲ့လှည့်စားနိုင်စွမ်းကိုတော့ ကျနော်တို့သိရှိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ရိုက်ရတဲ့ ရှုထောင့်၊အချိန်၊ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားက ဓါတ်ပုံကောင်းတစ်ပုံအတွက် အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ကျနော်တို့ရိုက်လိုက်တဲ့ ပုံတွေဟာ ကိုထင်ထားသလိုဖြစ်မလာတတ်ပေမဲ့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ပုံတွေကလဲ ထူးခြားတဲ့မြင်ကွင်းကိုပြောင်းလဲနေတတ်ပါတယ်။ယခုဖေါ်ပြပေးမှာကတော့ မြင်ရတဲ့ ကိုယ့်မျက်လုံးကိုတောင် မယုံကြည်နိုင်ပဲ ၂ ခါပြန်ကြည့်ရမယ့်အထိ အမြင်အာရုံကို လှည့်စားနိုင်လွန်းတဲ့ ဓာတ်ပုံများဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁. ဆွဲထားတဲ့ပုံက ရုပ်လုံးကြွနေတော့ ၂.ဘယ်လိုခြေထောက်လေးလဲ ၃. […]
ဒီတသက်စားရဖို့နော့မမြင် တလုံးကို တစ်သိန်းကျော်တဲ့ ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံးMiyazakiသရက်သီးအသီးမှာသရက်ဆိုသည့်အတိုင်း သစ်သီးများတွင်သရက်သီးသည် အရသာနှှင့်အရောင်အနံ့ကစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းပါသည်။ ကမ္ဘာ့သရက်သီးဇျေးကွက်တွင်ဇျေးအကြီးဆုံးသရက်သီးမျိုးမှာဂျပန်နိုင်ငံထွက်မီယာဇာကီသရက်သီးဖြစ်ပြီးသတ်မှတ်အလေးချိန်ရှိအသီးတလူံးလျင်($50-$70(မြန်မာငွေတသိန်းကျော်)တန်ဖိုးရှိပါသည်။အသီးအလေးချိန်သည်350gmအထက်ရှိရပါမည်။Miyazakiသရက်သီးသည်သာမန်သရက်သီးထက်၁၅%မျှပိုချိုပါသည်။ Miyazaki သရက်ကို ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ကျူရူးကျွန်းမှာ စိုက်ပျိုးပြီး ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး သရက်သီးဖြစ်ပါတယ်။သူ၏အရောင်နှင့် အချိုဓာတ်မြင့်မားမှုကြောင့် နာမည်ကြီးသရက်အဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်။ စိုက်ပျိုးသောနေရာသည်နေ့အလင်းရောင်ရရှိမှုမြင့်မားပြီး မိုးရေချိန်များ သောကြောင့်သရက်သီးက အရောင်လှစေတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။အသီး ရင့်မှည့်ပါက သူ့အလိုလိုကြွေသောအသီးက အချိုဓာတ်မြင့်မားတာကို သတိပြုမိတဲ့ […]
တစ်နှစ်ကို မြန်မာငွေ သိန်းပေါင်း ၁သောင်းခွဲလောက် ငွေရှာပေးတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံက အကြီးဆုံးနွားထီးကြီး
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ စူလတန်လို့အမည်ရပြီး ညတိုင်း ဝီစကီတစ်ပုလင်း သောက်တဲ့ အကြီးဆုံးနွားတစ်ကောင်တစ်နှစ်ကို မြန်မာငွေ သိန်းပေါင်း ၁သောင်းခွဲလောက် ငွေရှာပေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ နောက်ပြီးဒီနွားကြီးဟာ ဟာအလေးချိန် တစ်တန်ခွဲကျော်ရှိပြီး ပေါင် ၂.၅ သန်း (မြန်မာငွေ သိန်းပေါင်း ၄သောင်းကျော်) တန်ဖိုးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီနွားကြီးဟာ ပြိုင်ပွဲ ၇ ခုမှာပထမဆုရထားပြီး ဒေါ်လာသုံးသန်းကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်လို့ […]
ကြက်သွန်နီ(၁)တန်ပေးပို့ပြီး ရည်းစားဟောင်းကို ငိုစေချင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး
သင်အနေနဲ့ အသဲကွဲတာကို ကြုံဖူးပါသလား? စာဖတ်သူများအနေနဲ့ အသဲကွဲတာကို အနည်းနဲ့အများတော့ ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ အသဲခွဲခံရသူများအနေနဲ့ တစ်ဖက်လူကို ကိုယ်ခံစားရသလိုမျိုး ပြန်လည်ခံစားစေချင်တာတော့ မထူးဆန်းပေမယ့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကတော့ သူမကိုလှည့်စားပြီး အသဲကွဲအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ ရည်းစားဟောင်းကို ကြက်သွန်နီများပေးပို့ခဲ့ပြီး သူမငိုခဲ့ရသလို ပြန်လည်ငိုစေချင်ခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ ဇီပိုမြို့က Zhao လို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ […]
2018 ခုနှစ်တုန်းကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ကိုးရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲထဲတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်အကြောင်းပါဝင်ခဲ့
2018 ခုနှစ်တုန်းက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဒရမ်မာစီးရီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ” My Secret Terrius ” ဆိုတဲ့ ကိုးရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကပ်ရောဂါကို ကြိုတင်မှန်းဆပြီး ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ ထိုဇာတ်လမ်းတွဲကိုတော့ မင်းသား So Ji-sub နဲ့ မင်းသမီး Jung In-sun တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ဒါရိုက်တာ Park […]
သရဲခြောက်သည့်ပုံစံဖြင့် ပြည်သူများကို အိမ်အတွင်းမှာပဲနေစေရန် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အင်ဒိုနားရှားကရွာသားများ
အင်ဒိုနီးရှားရှိရွာငယ်လေးတစ်ရွာတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် ကပ်ဆိုးကာလ၌ရွာသားများအိမ်မှာပဲ နေထိုင်ကြစေဖို့အတွက် သရဲ ပုံစံများဝတ်ဆင်ကာ ခြောက်လှန့်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဂျာဗားကျွန်း Kepuh ရွာရှိ ထိုရွာသားအချို့သည် အဖြူရောင်ဝတ်စုံများဝတ်ဆင်ကာ လမ်းပေါ်တွင် လှည့်လည်သွားလာနေသူများအား ဘေးမှဖြတ်သွားဖြတ်လာပြုလုပ်ကာ ခြောက်လန့်ခြင်းနဲ့ ရုတ်တရက်ခုန်ထွက်ကာခြောက်လှန့်ခြင်းတို့ဖြင့် အိမ်တွင်နေထိုင်စေဖို့ ဖိအားပေးခဲ့ကြသည်။ သူတို့တွေကတော့ ဒီနည်းလမ်းဖြင့် လူကြီးတွေရဲ့ အယူသီးမှုတွေကို ပျယ်ဖျက်စေကာ အိမ်တွင်းနေထိုင်ကြစေရန် […]
ချစ်သူကို ရေငုပ်ပြီးလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့အမျိုးသား ရေနစ်သေဆုံး
Louisiana ပြည်နယ်က အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ ချစ်သူကိုရိုမန်တစ်ဆန်ဆန် ရေငုပ်ပြီးလက်ထပ်ခွင့်တောင်းရန် စီစဥ်ထားခဲ့ပေမယ့် ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ သူထင်မှတ်ထားသလို ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ သူရဲ့ချစ်သူကို ရေငုပ်ပြီးလက်ထပ်ခွင့်တောင်းနေစဥ်အတွင်း ရေနစ်သေဆုံးသွားခဲ့လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းများရဲ့အဆိုအရ Steve Weber ဆိုတဲ့အမျိုးသားနဲ့ သူ့ရဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့ Kenesha Antoine တို့ဟာ Tanzania နိုင်ငံက Pemba […]